सक्रिय चारकोल को अल्ट्रासोनिक Dispersing - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
सक्रिय चारकोल र सक्रिय कार्बन कस्मेटिक, मेडिकल र औद्योगिक उत्पादनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
उत्तम परिणामहरूको लागि, सक्रिय चारकोल समानरूपमा फैलिएको हुनुपर्छ: कणको आकार सानो, ठूलो कण सतह, गतिविधि राम्रो।
अल्ट्रासोनिक फैलावटले उच्च कण सतह र समृद्ध वितरण दिन्छ।
अल्ट्रासोनिक उपकरण सक्रिय कोकोल विकृतिहरूको लागी
अल्ट्रासोनिक प्रोब्युमेनिजरहरू नैनो सामग्रीलाई निलम्बनमा घुमाउन विश्वसनीय उपकरणको रूपमा चिनिन्छन्। सोन्याक्सले कणहरूलाई उप-माइक्रोन र नैनो आकारमा बाँध्छ र एक समान कण आकारको वितरण दिन्छ। फैलावट सामग्रीको गुणस्तरको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकी फैलावट अवस्थाले निर्धारण गर्दछ कि क्याणहरू बसिनेछ वा निलम्बनमा रहन सकिन्छ।
Hielscher को शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक प्रेषकहरू सानो, मिड-साइज र ठूलो संस्करणहरूको लागि उपलब्ध छन्। अल्ट्रासोनिक फैलावट ब्याच वा निरन्तर प्रवाह-मोड मोडमा चलाउन सकिन्छ।
आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईंको अनुसन्धान वा उत्पादनको लागि उपयुक्त अल्ट्रासोनिक उपकरण सिफारिस गर्न खुशी हुनेछौं!
कार्बन नानोट्यूबहरूको अल्ट्रासोनिक फैलाव: द हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटर यूपी 00०० एस (W०० डब्ल्यू) सीएनटीहरू छिटो र प्रभावकारी ढंगमा एकल नानोट्यूबहरूमा फैलिन्छ।
UP400S प्रयोग गरेर पानीमा कार्बन नानोट्यूबहरू फैलाउँदै
सक्रिय काइकोल र औषधिको कोइलाल स्पंज-जस्तै संरचनाको साथमा राम्रो-अन्न, पारायुक्त सामग्री हो। सानो, कम-भोल्युम पोर्टेसन एनासोशन वा रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको लागि सतह क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ। यस स्पंज ढाँचाको कारण, कोइकोल कण अत्यधिक विज्ञापनदाब हो र अवांछित पदार्थहरू (जस्तै तेल, ग्याँस, टेलिक, विषाक्त पदार्थ) प्रभावकारी रूपमा बाँध्न सक्दछ।
यसको विज्ञापन फंक्शन सक्रिय कार्बन एक धेरै प्रभावशाली सफाई पदार्थ मा फैर्मा गर्दछ जसले फार्मा र मेडिकल प्रोडक्ट्स, प्रसाधन सामाग्री, खाद्य र औद्योगिक एडोरबेंटहरुमा प्रयोग गरिन्छ।
एक राम्रो छानिएको सक्रिय कार्बन उच्च रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ र सानो मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ एक संकीर्ण कण आकार वितरणले महत्त्वपूर्ण परिचालन लाभ प्रदान गर्न सक्छ। सोनक्किङ सक्रिय चारकोलको ठीक-फरक फैलावटको लागि आदर्श तरिका हो।
HPLC स्तम्भहरूको लागि अल्ट्रासोनिक कण परिमार्जन
चूंकि सक्रिय चारकोलले ठूलो सतहको क्षेत्र प्रदान गर्दछ, यो एक धेरै प्रभावशाली adorbent हो। सक्रिय कार्बन / चारकोल को कण आकार, उच्च सतह को क्षेत्र र यस प्रकार को तेजी देखि अपने adsorption केनेनेटिक्स को दर।
के लागि सक्रिय कार्बन प्रयोग गरिन्छ?
ठीक आकार फैलिएको सक्रिय कार्बन ठूलो रूपमा अनुप्रयोगहरू र उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। कणहरूको अल्ट्रासोनिक फैलाउने परिणामले उच्च सतहमा भोल्युम अनुपातमा परिणामहरू दिन्छ, जसले तिनीहरूलाई निकै उच्च रिएक्टिविटी दिन्छ (उदाहरणका लागि adorbent, उत्प्रेरक)।
फुमा, खाना & प्रसाधन सामग्री थप
सक्रिय चारकोल फार्मा, खानेकुरामा धेरै उत्पादनहरूमा थपिंदै प्रयोग गरिन्छ & पेय, कस्मेटिक र रासायनिक उद्योग, जहाँ सक्रिय कार्बन डिकोटामिनन्ट, एडोबन्ट र सफान्सेन्सको रूपमा कार्य गर्दछ।
सक्रिय कार्बन समाधान को इलेक्ट्रोप्टिंग को शुद्धि को लागि धातु को परिष्करण को समयमा धेरै प्रयोग गरिन्छ (उदाहरण को लागि जैविक अशुद्धता को हटान को लागि)।
सक्रिय कार्बन उत्पादनबाट गुणात्मक अनावश्यक पदार्थहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि, कार्बनहरू प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गरिने सामग्रीहरू, अवांछित रंगहरू, जैविक अशुद्धताहरू, मध्यवर्तीहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ। यो फार्मास्यूटिकल्स, फूड्स को निर्माण मा शुद्धि चरणों को समयमा प्रयोग गरिन्छ & पेय पदार्थ, वाइन & रक्सी, रसायन & विशेषता रसायन, र अन्य उद्योगहरू हुन सक्छ।
सक्रिय कार्बन मिश्रणहरू विश्लेषणात्मक वा तयारी प्रोटोकॉलहरूमा (कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेटहरूको कम-दबाव क्रोमेटोग्राफिक विभाजन) मा स्थिर चरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ (मोबाइल चरणको रूपमा इथेनॉल समाधान)।
सक्रिय कोइकोल काटनाशकको ​​रुपमा प्रयोग गरिन्छ, पशु फिड र प्रसोधन एजेन्सीमा थप।